Fanehoan-kery foana | NewsMada
Par Taratra sur 24/05/2018
« Tsapao aloha ny herinareo… ». Nalaza io hafatra nataon’ny filoha teo aloha, Ravalomanana, io. Fantatr’izay tsy marivo fitadidiana ihany koa ny tohiny, taorian’izay « fitsapan-kery » izay. Tsy mbola nisy niova. Fifampitsapan-kery hatrany no misy eto hatramin’ny taloha ka hatramin’izao.
Ireny ny hetsika tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna. Nampiseho hery ny mpanohitra, rehefa nahatsapa fa maro loatra ny tsy azo ihafiana intsony amin’ny hataon’ny fanjakana. Nampiasa ny hery teo am-pelatanany koa anefa ny fitondrana, nanakanana izany tamin’ny voalohany. Nisy ny aina nafoy, izay nivadika ho hery ho an’ny mpanohitra, ary faharesena ho an’ny mpitondra.
Nitohy ny hetsika… Niitatra ny fitakiana ka tonga hatramin’ny fangatahana ny fialan’ny filoha Rajaonarimampianina Hery. Nihanahazo hery isan’andro ny mpanohitra notarihin’ireo depiote 73 ka niteraka horohoro ho an’ny mpanohana ny fitondrana izany. Raikitra ny valin-kafatra. Mila mampiseho hery haingana koa, hanehoana fa mbola misy ary maro ny mpanohana ny fitondrana.
Ireny ny zava-nitranga ny alatsinainy 14 mey, fotoana nisehosehoan’ny mpitondra tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Nampanantenaina vary sy menaka ary voamaina ireo mponina sahirana, tonga nameno ny lapa. Tsy nahandry tantana tamin’ny fizarana ka nivadika fifanjevoana tsy nisy toy izany…
Andrasana ny asabotsy izao ny tena fampisehoan-kery goavana avy amin’ny mpanohana ny fitondrana. Hifamotoana etsy amin’ny Coliseum Antsonjombe izy ireo, hotarihin’ireo depiote sy loholona, ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry mpanohana rehetra. Efa raikitra ny fitaomana vahoaka hameno ny toerana. Aleo hatao hoe siosion-dresaka sy tsaho mandeha fotsiny ny hoe tambazana vola sy vary mihitsy izay ho any.
Ny zava-misy aloha, hay azo atao ihany ny manao tatitra sy mamory vahoaka. Miasa be ny vola anatin’ny fanehoan-kery toy izao, satria raha latsaka noho ny an’ny mpanohitra eo, iharan’ny tondro molotra…
Mety daholo izany e! Fa ilay tena fampisehoan-kery, hahitana ny tena matanjaka, dia ny fifidianana no andrasan’ny maro. Amin’io, miverina amin’ny vahoaka na mandritra ny andro iray fotsiny aza ny hery sy ny fahefana. Izy no manapa-kevitra farany hoe “Miala i …”.